चौतर्फी बि’रो’ध पछि बल्ल मुख खोल्यो सरकारले विज्ञप्तिसहित — Imandarmedia.com
काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालयले चुरे क्षेत्रको संरक्षण र सम्वर्द्धन गर्न प्रतिबद्ध भएको जनाएको छ । बजेट वक्तव्यमा व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न सरकारले खानीजन्य ढुङ्गा, गिटी र बालुवा निर्यात गर्ने उल्लेख गरेपछि त्यसको चौतर्फी वि’रो’ध र आलोचना भएको थियो ।
यस्तै सरकारले उपचारवापत लाग्ने शुल्कको विवरण सार्वजनिक गर्न निजि अस्पतालहरुलाई सात दिने अल्टिमेटम दिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले मंगलबार एक सूचना जारी गर्दै बिरामीको उपचारवापत लाग्ने रकम ७ दिनभित्र सार्वजनिक गर्न सरकारी, निजी, सामुदायिक सबैथरि अस्पताललाई निर्देशन दिएको हो ।
गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखा प्रमुख डा. मदनकुमार उपाध्यायले जारी गरेको सूचनामा ७ दिनभित्र आफ्नो अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रवाह हुने सेवाको प्रकार र त्यसको लागत रकम शीर्षकसमेत उल्लेख भएको मूल्यसूची सञ्चालक समितिबाट निर्णय गराइ वेबसाइट वा सूचना पाटीमा सार्वजनिक गर्न भनिएको छ । त्यस्तै उक्त मूल्यसूचीको विवरण स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनको इजाजत दिने निकायमा पनि पठाउन भनिएको छ ।
कोरोना महामारीको समयमा बिरामीको उपचारवापत चर्को शुल्क लिएको, अक्सिजनको समेत अत्याधिक शुल्क लिएको, अनावश्यक परीक्षण गर्न लगाएर आर्थिक व्ययभार थपेको, उपचारका लागि चाहिने सामान बिरामीलाई किन्न लगाएको तथा आवश्यकभन्दा बढी औषधि किन्न लगाएको गुनासो आएको मन्त्रालयले जनाएको छ । अटेरी गर्नेमाथि सरकारले कडा कारवाही गर्ने जनाएको छ ।
केहिदिन यता भारतसँगै नेपालमा पनि म्युकोरमाइकोसिस अर्थात् ब्ल्याक फङ्गस (कालो ढुसी)का बिरामी देखिन थालेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा १० भन्दा बढीमा ब्ल्याक फङ्गस अर्थात् कालो ढुसी देखिएको हो । भारतका कतिपय राज्यमा ब्ल्याक फङ्गसलाई महामारीको रुपमा घोषणा गरिसकेको छ ।
नेपालमा कोरोना संक्रमितमा क्रमशः ब्ल्याक फङ्गस देखिन थालेको आईओएमका सहप्राध्यापक तथा छाती रोग विशेषज्ञ डा. निरज बम बताउँछन् । त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा कालो ढुसी सक्रमण भएका ४० वर्षका एक पुरुषको शल्यक्रिया गरिएको डा.बमले बताए । कालो ढुसी देखिएका ति व्यक्तिको आँखा र नाकको शल्यक्रिया गरिएको हो ।
शल्यक्रिया गरिएका ती बिरामीलाई एम्फोटेरिसिन बी औषधिको प्रयोगबाट उपचार गरिरहेको डा.बमले जानकारी दिए । ‘फङ्गस अर्थात (कालो ढुसी) अर्का एक जनाको शल्यक्रियाको तयारी भइरहेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘कोरोना मुक्त भएर अस्पतालबाट फर्किसकेपछि ललितपुरका एक जनामा कालो ढुसी देखिएको उपचारको लागि टिचिङ अस्पताल आउनुभएको छ ।’
यस्तै वीर अस्पतालपनि ३१ वर्षीय पुरुषमा कोरोना संक्रमणपछि कालो ढुसीको समस्या देखिएपछि सोमबार शल्यक्रिया गरिएको अस्पतालले जनाएको छ । ती ३१ वर्षीय पुरुषको नाक तथा आँखामा फैलिसकेको फङ्गस शल्यक्रिया गरेर निकालिएको अस्पतालले जनाएको छ । सर्जरीपछि ति विरामीकाे कोभिड आईसीयूमा उपचार भइरहेको अस्पताल पूर्व निमित्त निर्देशक डा.शान्ता सापकोटाले बताइन् । नेपालमा पनि कोरोनामुक्त भइसकेपछि म्युकोरमाइकोसिसको समस्या देखिएको डा. बम बताउँछन् ।
म्यूकोर्माइकोसीस (Mucormycosis) नामक फंगाइका कारण हुन्छ । दीर्घरोगी तथा पुनः बिरामी भएका, शरीरको प्रतिरोधी प्रणालीलाई कमजोर बनाउने औषधीहरु सेवन गरिरहेका, प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर भएका व्यक्तिलाई म्यूकोर्माइकोसीस तथा कालो ढुसी संक्रमण हुने डा. बम बताउँछन् ।